Fire Testing Equipment, Flammability Tester - faravodilanitra
Dongguan faravodilanitra AN'NY TAOZAVA-BAVENTY CO., LTD.
Rearch ny Applications
Rearch ny Industry
Rearch ny Standard
Rearch ny Products
ISO5660 Cone Calorimeter Analysis fitaovana Heat Release Product fampidirana ny Cone Calorimeter Cone Calorimeter fepetra nafanaina fanafahana tahan'ny (HRR), setroka fanafahana, ignition ny fotoana, oksizenina fanjifàna, gazy sy ny gazy karbonika taranaka sy faobe very tahan'ny rehefa specimen no tratran'ny loharano ny bongo heater.
Nirehitra Single Item Flammability Testing Fitaovana
Single Nirehitra Item Flammability Testing Fitaovana amin'i Stainless Steel Gas Fanangonana Hood Product fampidirana ny Single Nirehitra Item The Single Nirehitra Item (SBI), dia fomba fitsapana ho an'ny famaritana ny fanehoan-kevitra amin'ny afo fitondran-tena ny fanorenana vokatra (manavaka floorings) rehefa tratran'ny amin'ny mafana fanafihana amin'ny alalan'ny fandoroana zavatra tokana (ny fasika-boaty burner namatsy amin'ny propane). Ny specimen dia nitaingina amin'ny Trolley izay napetraka ao amin'ny toetsika rafitra ambany ny setroka. Ny fihetsiky ny specimen ny burner dia araha-maso instrumentally sy hita maso. Hafanana sy ny setroka famoahana ny tahan'ny norefesiny instrumentally sy ara-batana no toetra fanombanana ny fandinihana.
Bunched Cable mitsangana Flame Tester
Bunched Cable mitsangana Flame Tester amin'ny Stainless Steel Test Box Product fampidirana ny Bunched Cable mitsangana Flame Tester Bunched Cable mitsangana Flame Fielezan'ny Tester dia andian-dahatsoratra manaraka IEC 60332-3-10 (teny A ~ D) fitsipika. Ny fitsapana fepetra ny fanitarana ny mitsangana lelafo ny elektronika, na optically mitsangana tariby na tariby mampiasa ny fitsipika ignition raha manome loharano anankiray habetsahan'ny rivotra ho amin'ny efi-trano ny iray voafaritra boky. Ankoatra izany, raha mitsangana bunched tariby lelafo niely testers burner no nanitsy ny 20 degre fiolahana, dia mety ho eo ambany IEEE fepetra 383 (IEEE 1202) fitsipika. Koa, raha Heat Release Facility dia mifatotra, dia afaka mandrefy afo fihetsehana danja toy ny HRR (Heat Release Rate), SPR (setroka Production Rate) sy ny sisa.
Building Material setroka Density Tester
Building Material setroka Density Tester araka ny ASTM D2843 Product Profile of Building Material setroka Density Tester hakitroky ny setroka Mpamantatra ny fitaovam-panorenana no mivelatra ny Rohm Haas Company of America ho an'ny fanaraha-maso anatiny. Ary dia nitranga tamin'ny taona 1970 araka ny ASTM D2843 fitsipika. Ny fototra no Billumber teorika ny lalàna, izany hoe ny setroka vokatry ny fandoroana fitaovana misy fiantraikany mivantana ny lelafo, ary ny mazava dia niaro fidiran'ny fitaovana rehefa mirehitra. Ny tahan'ny be loatra no dia ampiasaina mba hamaritana ny setroka hakitroky sarobidy (SDR). Amin'izao fotoana izao, bebe kokoa ny fampiharana ny firenena izay no lasa fitsipika GB 8624, fa ny setroka hakitroky fizahan-toetra ny PVC casing, fa koa noho ny setroka hakitroky fampisehoana fitiliana ny fiara fitaovana anatiny.
Dongguan faravodilanitra AN'NY TAOZAVA-BAVENTY CO., LTD. dia South China Mpitarika ao amin'ny famolavolana, orinasa mpamokatra entana, sy ny asa fanompoana ao amin'ny birao isan-karazany ny fanaovana fitiliana vahaolana avo lenta ho amin'ny afo Testing Fitaovana.
Asa sy ny vinan'ny
Ny iraka dia ny hanolotra kalitao avo Testing Fitaovana afo sy ny fitiliana tanteraka vahaolana ho an'ny fitaovam-panorenana, fiaramanidina, lalamby, Imo, Furniture, ary Cables & tariby 'Industries. Mba hanome ny tsara indrindra vahaolana ny hanampy ny mpanjifa mampihena ny fatiantoka noho ny afo.
Ny Vision dia ho mahomby indrindra Ara-tsindrimandry, ary mpamorona sy mpanamboatra liana ny mizaha toetra vahaolana amin'ny alalan'ny orinasa indrindra foana fivoarana sy ny maneran-tany momba ny maha-ao amin'ny vokatra sy ny tolotra.
Nanomboka hanao ny mari faravodilanitra sy ny vokatry mizaha toetra fitaovana hatramin'ny 2008 nandritra ny taona maro: 'fampandrosoana, indrindra fa nandritra ny fiaraha-miasa amin'ny antoko maro ny faha-3-Labs sy ny vahiny avo-end mpanamboatra, dia nanome anay amin'ny maro supervisions sy ny fanampiana, ny tsara indrindra isika voangony fitiliana traikefa sy ara-teknika fepetra arahana, ary izany dia nanangana feo fototra ho antsika ny manome asa fanompoana tonga lafatra. Lahatsoratra olana ara-tsosialy
isika mpivarotra ny SASO, SGS, ny fitsipika Institution ny Isiraely, Intertek, BV, TUV, Hasbro, Mattel. Efa ho 100% ny kilalao fitsapana fitaovana ny mihoatra noho ny Labs dia novidiny avy faravodilanitra. Izy ireo misolo tena ny fenitra ambony indrindra any an-tsaha naka fanahy kilalao. Voninahitra ho antsika sy mirehareha amin'ny famatsiana fitaovana hitsena ny fitsapana fitakian'ny.
Steiner Tionelin'i Test fitaovana
Miramirana Flooring Panel Test fitaovana
NBS setroka Density Chamber
Address: 3 / F 2 Building Minghui Industrial Zhongwuwei Niushan Dongcheng District Dongguan, Guangdong 523128 Sina